5 ihe ịmaghị banyere igwefoto nche gị | Akụkọ akụrụngwa
Ihe 5 na amaghi banyere igwefoto nche gi
Akụkọ akụrụngwa | 26/04/2021 10:53 | Ngwa
Nchedo ụlọ gị, azụmahịa ma ọ bụ ọfịs dị mkpa. Maka nke a, enwere sistemụ mkpuchi nke igwefoto onyunyo na-esonyere ekwe ka ichebe ebe di iche iche echedo ma choputa n’oge kwesiri ndi batara n’ime ya. Otú ọ dị, ha ka dị n'ezie ihe ị maghị maka igwefoto nche gị nke ahụ emewokwa ka ha ghọọ ngwá ọrụ dịgasị iche iche.
1 Igwefoto maka abamuru nke nchekwa
2 Ihe ịmaghị maka igwefoto nche gị
3 Uru nke iji igwe onyunyo onyunyo
Igwefoto maka abamuru nke nchekwa
Nche ese foto na-arụ ọrụ dị ka a vidiyo sekit mechiri emechi nke jikọọ na usoro onyunyo, nke a na-ahụ naanị site n'aka ndị nwere ike ịnweta. Ya ọrụ bụ idekọ ihe na ozugbo, na-photos si n'akụkụ dị iche iche na na-agbasa ozi na-eme ihe na - eme ọbụlagodi ogo 360 Celsiusnke mere na onye nwe ya nwere ihe nkwado bara uru ma ọ bụrụ na onye zuru ohi.
Ọtụtụ ndị ọrụ ugbu a nwere onyunyo onyunyo jikọtara na mkpu ha, na mgbakwunye na iji ọrụ etiti dị ka ndị enyere Movistar Prosegur Mkpu, ebe ha achọpụtala na ha bụ a isi mpempe iji chebe ụlọ gị ma ọ bụ azụmahịa gị oge niile.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ dịka Prosegur na-enye gị ọtụtụ ọrụ dị na ya ị nwere ike ịhọrọ onyunyo igwefoto onyunyo nke dabara na mkpa gịMa ị chọrọ nchọpụta mmegharị na nnukwu ụlọ ma ọ bụ obere ime ụlọ.
Ihe ịmaghị maka igwefoto nche gị
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ese foto nchebe abụrụla ewu ewu taa ma jiri ya na-agbanwe agbanwe na ụlọ dị iche iche. Enwere ọchịchọ ịmata ihe banyere ha nke ị nwere ike ọ maghị, dị ka ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru:
N’afọ Ejiri igwefoto nchedo 1960 iji nyochaa mwepụta rọketi na Germany. Ọ bụ Walter Bruch haziri usoro ya, iji soro ihe omume ahụ na-etinyeghị ndụ ndị ọrụ ya n'ihe egwu.
Site na nyocha emere na 2014 e kpebiri na enwere kamera nche dị nde 245 na ụwa, na-arụ ọrụ zuru oke, ọnụ ọgụgụ nke, obi abụọ adịghị ya, amụbawo taa n'ihi ọganihu ọgbara ọhụrụ na ịnweta easyntanetị dị mfe.
You maara na oge ọ bụla ị na-eji igwe ndọrọ ego, a na-enyocha gị site na igwefoto? N'ezie, enwere ọtụtụ wayo nke edozila site na eserese edere na ngwaọrụ ndị a.
Enwere ebe a na-etinye igwefoto onyunyo na-edekọ elekere 24 kwa ụbọchị, dịka ọ dị maka ebe ịzụ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ akụ, okporo ụzọ ọha na isi n'okporo ụzọ dị n'obodo ndị mepere emepe.
Camerasfọdụ kamera nche na-arụ ọrụ na-enweghị ọkụ eletrik, maka nke a, a na-enye ha batrị nke na-enye ha ohere ịnọgide na-edekọ n'ime oge ụfọdụ.
Ugbu a, ọtụtụ mmadụ nwere ekwentị mkpanaaka nke na-enye ha ohere ijikọ na Internetntanetị, jiri nke a ha nwere ike ịnweta onyonyo nke igwefoto onyunyo nyere site na ngwa nke ndị na-eweta mkpu ha nyere na hu na ezigbo oge ihe n’eme n’ime ngw’oru gi, si n'ebe ọ bụla n'ụwa.
Uru nke iji igwe onyunyo onyunyo
Anya onyunyo ese foto bụ anya sistemụ nchekwa gị, ha nwere ike ịchọpụta mmegharị site na ihe mmetụta dị n ’ebe dị mma na rụọ ọrụ mkpu na-adọ ha nke edebanyere aha n'ime etiti dika Movistar Prosegur, onye ga-agwa ndi ochichi kwekọrọ na obere oge.
Ka i wee chebe ulo gi ma obu ahia gi, ị nwere ike họrọ nke kacha mma onyunyo usoro na-eme ka n'aka na ọ nwere oru oma ese foto na oke mkpuchi zuru oke. I kwesịkwara ịtụle mkpa gị, ebe ọ bụ na ị dabere na ha, ị ga-eduzi nhọrọ nke igwefoto nchekwa gị kachasị mma.
Dịka ọmụmaatụ, ị ga-ahụ ụfọdụ nwere oke dị iche iche dịka igwe ọkụ, mana ogo vidiyo adịghị mma nke ukwuu; mgbe ndị a na-eme na obere mkpuchi na-enye gị ohere ịchọpụta njirimara nke onye omekome nke ukwuu. N'aka nke ọzọ, iji PTZ na-agbasa ebe ị na-ekiri ebe ọ nwere mmegharị, nke na-eme ka ọ dịrị gị mfe ijikwa ebe ụfọdụ.
Ọzọkwa, ị kwesịrị iburu n'uche nke ahụ Ọ bụghị otu ihe iji kpuchido nchedo nke flat, chalet ma ọ bụ ụlọ ọrụ karịa ụlọ ọrụ, ke otu ikpe ị ga-ahọrọ ọnụọgụ igwefoto dị mkpa iji kwado nkwa mkpuchi dị iche iche.
Na mkpokọta, sistemụ onyunyo onyunyo dị n'ime ngwa mkpu dịka ndị sitere na Movistar Prosegur Alarmas, nke gunyere ngwa niile dị mkpa maka ntinye nke sistemụ nchekwa a ma nye njikọ na-adịgide adịgide na ọdụ nnabata gị na-adịgide adịgide. , na-elekọta ụlọ gị ma ọ bụ azụmahịa gị oge elekere 24 n'ụbọchị, ụbọchị 365 n'afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ihe 5 na amaghi banyere igwefoto nche gi
LG Tone Free HBS-FN7: Nkagbu Noise na-arụ ọrụ na Ọtụtụ More
Huawei weghachite laptọọpụ MateBook D 15 ya na ibe Intel ọhụrụ